သင်ဤနွေဦးအတွက်ခရီးသွားသွားကြဖို့အဘယ်မှာရှိချင်ပါသလဲ? - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကခရီးသွားချင်ပါတယ်နွေဦးရာသီ, မကြာမီလာမည်သလဲ? သို့မဟုတ်ထွက်သွားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာစူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား? သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်မိသားစုတစ်ခုအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအားလပ်ရက်ပေးဖို့လိုသလား?
အဖြေဟုတ်ပါတယ်, ထွက်သွားကြဖို့တစ်နေသာနေ့ကရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ခရီးရဲ့အဆုံးမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့ရှုခင်းကိုဖမ်းပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြင်နာ, သင်သည်ရှေးခယျြလေယာဉ်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုပိုနှစ်သက်ကြပါသောမေးခွန်းရှိပါသလော သင်တစ်ဦးခရီးရဲ့အဆုံးမှာတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါသင်ရွေးချယ်မည်သို့ပင်, သင်တို့ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတို-အကွာအဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရာတိုအကွာအဝေးခရီးသွား tool ကအကောင်းဆုံးလဲ?
ယနေ့ခေတ်သည် လျှပ်စစ်စကိတ် လူငယ်အများစုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ ဒါဟာမသာကောင်းတစ်ဦးအသွားအပြန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်လည်းတကယ်ကလူရဲ့မျက်စိကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တရုတ် Koowheel2မျိုးဆက် လျှပ်စစ် longboard (Dual-brushless အချက်အချာ-မော်တာ), အစားထိုးဘက်ထရီရှိပါတယ်ဘက်ထရီကြာကြာသွားပါ, 60km ကြာရှည်နိုင်ပါတယ် 2pcs ။ ၎င်း၏ပုံမှန်မြန်နှုန်း 30km / h, ထိပ်မြန်နှုန်းမှာ 42 / ဇ, ပိုမြန်သွားပါသည်။ (ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်လမ်းအခြေအနေပေါ် မူတည်. ) အပြင်, ဒီလေကြောင်းခရီးသွားဘို့အတည်ပြုထားတဲ့လျှပ်စစ်စကိတ်စီးသည်, သငျသညျမှာအပေါငျးတို့သဘော်ဒါပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်တစ်ဦးဖက်ရှင်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများမှာလျှင်, ဆောင်ကြဉ်း လျှပ်စစ်စကိတ်စီး သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဤလောကကိုစူးစမ်းလေ့လာစတင်လမ်းတစ်လျှောက်လှပရှုခင်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤနွေဦးရာသီ၌သာယာသောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောခရီးစဉ်များအလိုရှိ၏။